Thu, Jan 20, 2022 | 04:51:46 NST
सनत प्रसाद सापकोटा ।
पहिलो प्रकारका मानिसहरु जसले आम्दानी भन्दा खर्च धेरै गर्छन । क्षणिक रमाईलो त पाउँछन नै तर धेरैको भविष्य अन्धकार हुन्छ किनकी आर्थिक श्रोत भनेको सँधै जुट्दैन । मानिसमा सँधै त्यो शक्ति रहँदैन जसले गर्दा उसले कमाएर खर्च गरिरहन सकोस । पैतृक सम्पत्तिको दोहन गर्नेहरुको कथा भने फरक होला ।
धनलाई हातको मयल मानिन्छ । यो कुन बेला आउँछ र कुन बेला जान्छ यसको ठेगान हुँदैन । अर्कोथरी मानिसहरु पैसा पाउने वित्तिकै बचत गरिरहन्छन् । कमाउनु भन्दा पैसा जोगाउनु ठुलो हो भनेर जानेका हुन्छन । सानै उमेरदेखि पैसा बचाउनु पर्छ भनेर सिकाइएको हुन्छ । यिनीहरु कमाउनु र बचत गर्नु फरक कुरा रहेछ भन्ने कुरा बुझेका हुन्छन ।
खर्च गर्न र लगानी गर्न कन्जुस्यार्इँ गर्ने प्रकारका बचतकर्ताहरु भविष्यको अन्तरालमा बचत गर्ने मानिस पनि गरिब पनि हुन सक्छ । बचत गर्ने मानिस त धनी बन्नुपर्ने हो तर कसरी गरिब भयो त ? बचत गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन किन भने बचत रकममा प्राप्त हुने ब्याजको रकम वार्षिक मुद्रास्फ्रिती दर भन्दा कम भयो भने पैसाले आफ्नो मूल्य गुमाउँछ ।
साधारणतया नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा बचत गर्दा प्राप्त हुने ब्याज वार्षिक मुद्रास्फ्रिती दर भन्दा कम हुन्छ । जसले गर्दा पैसाको मूल्य अर्को वर्ष त्यत्ति नै रहँदैन । त्यसकारण बचत भनेको छोटो समयको लागि र आपतकालिन अवस्थाको लागि मात्र गर्नु पर्छ । त्यसो भए के बचत गर्नु हुँदैन भन्न खोजिएको हो त ? अवश्य पनि होइन बचत गर्नु पर्छ बचतलाई लगानीको रुपमा प्रयोग गर्नु पर्छ । तुलनात्मक फाइदालाई मूल्यांकन गरी बचतलाई लगानी गर्नु पर्दछ । लगानीबाट मात्रै समृद्धि सफल हुन्छ ।
सानै उमेरमा लगानी गर्न हुँदैन, सानो व्यक्तिले लगानी गर्न सक्दैन त्यसकारण उमेर ठुलो भएपछि लगानी गरौंला । जागीर खाँदा लगानी गर्न फुर्सद छैन जागीरबाट बाहिर आएपछि लगानी गर्न शुरु गरौंला । राज्यले छुट दिन्छ अनि व्यवसाय गरौंला । गरीब छु गरीबले कसरी लगानी गर्न सक्छ ? त्यसकारण धनी हुन्छु अनि लगानी गरौंला, एक्लैले लगानी गर्न सकिँदैन साथी खोज्छु अनि लगानी गरौंला । मलाई लगानी फाप्दैन, यो वर्ष साइत छैन अर्को वर्ष गरौंला, धन भनेको भाग्यमा लेखेको हुन्छ ।
धनी हुनु छ भने जसरी पनि धनी भइन्छ भन्ने सोचहरुको प्रभावले हामीहरु लगानी गर्दैनौं । लगानी गर्नका लागि कुनै साइत, लगन, समय र अवसरको प्रतिक्षामा बसिरहन्छौं ।
अहिले जोखिम बढी छ, पछि जोखिम कम हुन्छ अहिले पर्खिने हो भन्ने जस्ता विभिन्न सोचहरुले लगानी गर्नका लागि पाइला चाल्न रोकेको हुन्छ । कुनै व्यवसायमा साच्चिकै जोखिम पनि हुन्छन तर धेरै जसो व्यवसायहरु शुरु नहुनुमा वातावारण र जोखिम भन्दा पनि सकारात्मक सोचको कमी कै कारणले व्यवसायहरु सुरुवात हुन सकिरहेको हुँदैन ।
पानीमा जहिले पनि जोखिम छ किनकी यसले डुबाउँछ । तर जो पानी माथी तैरिन जान्दछ उसले त्यसको मज्जा लिन्छ । उसका लागि त्यो अर्को किनारमा पुग्ने माध्यम बन्छ र त्यो अवसर बन्छ । लगनशिल भएर कुनै व्यवसायमा लगानी गर्ने वा व्यवसाय संचालन गर्ने सोच राखेमा अवश्य सफल भइन्छ । चुनौती आउन सक्छन, जोखिम आउन सक्छ । तर ती चुनौती तथा जोखिमहरुले राम्रो ज्ञान तथा सीप प्रदान गर्छन जसबाट भविष्यमा अझ बलियो रुपमा व्यवसायमा टिकिरहन सक्षम बनाउँछ ।
कर्म र व्यवहारबाट आफैं अनुभुत नगरी अरुले भनेका कुराहरुमा विश्वास गर्न सिकाइएको छ । जस्तै सानो उमेरदेखि नै हामीलाई भाग्यमा विश्वास गर्न सिकाईको छ । भाग्य कसैले लेखिदिन्छ र सोही अनुसार जीवन चल्छ भन्ने कुरा बुझाइएको छ । हामी त्यो कुरालाई हुर्काउँदै जीवन बिताइरहेका छौं । त्यसकारण हामी हाम्रो आफ्नो प्रयास भन्दा पनि कहिँकतैबाट कुनै चमत्कार हुने आशमा छौं । चमत्कारिक रुपमा भविष्यमा धनि हुने आशमा वर्तमानलाई गुमाईरहेका छौं ।
हामी बिउ नरोपी फल फल्ने आशमा छौं । धेरै जसो व्यक्तिलाई कामै नगरी पैसा आओस् भन्ने अपेक्षा पनि छ । तर वास्तविकता लगानी नगरी प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । हामी समयलाई पर्खिरहन्छौं तर समयले हामीलाई पर्खिदैन । समयले हामीलाई अवसर प्रदान गरिरहेको हुन्छ तर त्यको भाषा बुझ्ने क्षमता हामीमा हुँदैन । समयले प्रदान गर्ने व्यवसायिक अवसरको भाषा बुझ्नका लागि सबै व्यक्ति वित्तीय साक्षर हुनु र वित्तिय रुपमा सजग हुनु जरुरी हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुले पठाउने रकम उच्च भएको अहिलेको अवस्थामा उपभोग तथा सुविधाहरुको खपत अत्याधिक छ । उत्पादन एक दम कम छ । वैदेशिक आयात एकदम बढी छ । तसर्थ सोझै भन्न सकिन्छ की व्यापार फस्टाउने अवसर धेरै छ । तर हामी व्यवसाय सुरु गर्नका लागि कुनै लगन कुरेर बसीरहेका छौं । लगानी गर्नका लागि लगन नकुरौं लगनशिल भएर लगानी गरौं ।
(सापकोटा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामीमा वरिष्ठ तालिम अधिकृत तथा वित्तीय साक्षरता फोकल पर्सनका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)